नयाँ शक्तिको गलत दाबी | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home बिचार नयाँ शक्तिको गलत दाबी
राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्थिरता, जवाफदेही, भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी सुशासनले मात्र लोकतन्त्र फस्टाउने र समृद्धि हासिल हुन्छ । भट्टराईको प्रक्षेपित ‘आइकन’ छवि र उनको ‘नयाँ शक्ति’ बारे केही भ्रम र वास्तविकता यहाँ चर्चा हुनेछ ।
पहिलो, भट्टराई आफू सदाचारी र बाँकीलाई भ्रष्टाचारी चित्रण गर्छन् । तर, नेपालमा सबैभन्दा भ्रष्ट सरकार उनकै थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ प्रकाशन भएयता सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार उनको पालामा थियो । उनको पालामा नेपालको स्थान सन् २०११ मा १८३ देशमा १५४ औँ र २०१२ मा १७६ देशमा १३९ औँ थियो । त्यस्तै ‘ग्लोबल कम्पेटिटेभ इन्डेक्स’ र ‘डुइङ बिजनेस’को ‘¥याङ्किङ’ समेतमा भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकाल अरुको भन्दा नेपालको स्थान धेरै तल थियो ।
दोस्रो, इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो ४९ मन्त्री भएको सरकार उनकै पालामा थियो । देउवा सरकार ४८ र ओली सरकार ४१ मन्त्रीसहित दोस्रो र तेस्रो ठूला सरकार हुन । २०५२ सालमा देउवा प्रधान मन्त्री रहँदा राजनीतिक विकृति÷विसंगतिलाई बढावा दिएको भनेर ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउन भट्टराई आफै गए । परिणाम, करिब पन्ध्र हजार मारिए, चौध सयजति बेपत्ता भए र अर्बौंको भौतिक पूर्वाधार क्षति गर्ने दस वर्षे गृहयुद्धले देश दशकौँ पछि धकेलियो ।
उनले संविधान सभाको अंक गणितले ठूलो सरकार बनाउन बाध्य भएको दावी गरे । तर देउवाको पालामा पनि कसैको बहुमत थिएन । भट्टराईले गर्न हुने र देउवाले नहुने भन्ने तर्क भट्टराई बाहुन हुनाले उनले जे गरे पनि हुन्छ तर देउवा ठकुरी भएकाले मिल्दैन भन्ने कुतर्कले मात्र भट्टराईले उन्मुक्ति पाउँछन् ।
तेस्रो, भट्टराईले प्रधान मन्त्री हुँदा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ‘भ्याट स्क्याम’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक मात्र गरेनन्, नेपालका करिब ३२०० व्यापारिक घरानाले अर्बांैको भ्याट ठगी गरेको यो घटना उनकै कारण सार्वजनिक भएन भन्ने जानकारी अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारले नाम नबताउने सर्तमा दिएका छन् । यत्रो ‘स्क्याम’ दबाउने व्यक्ति अरु प्रधान मन्त्रीभन्दा कसरी नयाँ भए ?
चौथो, हिसिला यमी विश्वको सबैभन्दा भ्रष्ट महिला भनेर टाइम पत्रिकाले समाचार छाप्यो । उनले त्यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेनन् । त्यो आरोप माइला बाजेको सन्ध्याकालीन दैनिकमा छापिएको होइन, टाइम पत्रिकामा छापिएको हो । पत्रिका समाचारको स्रोत, तथ्यपरकता, संवाददाताको विश्वसनीयता र पत्रिकाको सम्पादकीय सदाचारमा मानक मानिन्छन् । त्रुटि भएमा क्षमा याचना गर्छ । दक्षिण अफ्रिकी नेता मन्डेलाले भ्रष्टाचारको विवादमा मुछिएपछि श्रीमती विन्नीलाई मन्त्रीबाट हटाएर कानुनको कठघरा उभ्याए । अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जेल हाल्यो । मन्डेलाले श्रीमतीलाई तलाक दिए । भट्टराईले हिसिलामाथि लागेको आरोपको न्यायिक छानविन गराउनुपथ्र्याे, सुशासन÷सदाचारी कहलाउन । तर गरेनन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, भट्टराई सबैभन्दा भ्रष्ट सरकारका प्रधान मन्त्री हुन् ।
‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’मा प्रथम
भट्टराई नातागोतालाई राजनीतिक नियुक्ति गर्नेमा प्रथम नै हुन् । उनले भाइ, बुहारी, साली, जेठी सासूदेखि घर र ससुरालीका दूरका रिस्तेदारसम्मलाई राजनीतिक नियुक्ति गरे । ससुरालीवाद भित्र्याउने नेता भनेर भट्टराईबारे किस्सासमेत बने । सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ घोषणा गर्ने मानक अभ्यास छ । नियुक्ति प्रक्रियामा नातेदार वा व्यावसायिक स्वार्थ नभएको स्वघोषणा गर्ने सामान्य दायित्व हो । नेपालमै भगवान् कोइरालाले सहिद गंगालाल अस्पतालमा आफू निर्देशक रहुञ्जेल कोइराला थरका कोही पनि नियुक्ति नगरेको प्रेरक उदाहरणै छ । तर, उनले यसो गरेनन् । जसबाट उनले सार्वजनिक पदको मानक नैतिकता कायम गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
विधिको शासन विरोधी
विधिको शासन सुशासन, लोकतान्त्रिक अभ्यास र आर्थिक सामाजिक विकासको न्यूनतम सर्त हो । भट्टराई यो नमान्नेमा पनि प्रथम हुन् । पहिलो, अपराधी जोगाउने र अपराधको राजनीतीकरण गर्नेमा पनि पहिलो स्थानमै आउने भट्टराई इतिहासमै सबैभन्दा बढी हत्याका अपराधीलाई माफी दिने निर्णय गर्ने प्रधान मन्त्रीमा पर्छन् । अपराध गर्नेले सजायको भागिदार हुनुपर्छ, जस्तोसुकै शक्तिशाली व्यक्ति किन नहोस् भन्ने विधिको शासनको प्रवर्तक डायसीद्वारा स्थापित मान्यताविपरित कार्य गर्नेले सुशासन कसरी दिन्छ ?
दोस्रोे, भट्टराईको स्थायी लेखा नं. १०३०४२२७७ मा भएको करकट्टी आधारमा उनको आम्दानी र उनको दैनिकी चल्न आवश्यक खर्चबीच धेरै ठूलो अन्तर पाइन्छ । २०७१ असारदेखि २०७२ जेठसम्मको उनको वित्तीय विवरणमा पारिश्रमिकवापत सरकारी कोषबाट १९ लाख ९७ हजार पाएको र रु. २१७१८९ स्रोतमा अग्रिम कर कट्टी भएको देखिन्छ । सरकारी पारिश्रमिकबाहेक उनको अन्य आम्दानी देखिँदैन । त्यसभन्दा अगाडि आफै प्रधानमन्त्री हुँदाको समयसमेत र पछाडिको वित्तीय विवरण पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाएका छैनन् ।
त्यस्तै भट्टराई गएको असोजयता सांसद छैनन् । उनको आम्दानीको स्रोत के हो ? उनले नयाँ शक्ति अभियानमा गरेको लगानीको स्रोत के हो ? के वास्तवमै वैधानिक स्रोतबाट कर कट्टी भएको वित्त लगानी भएको छ ? एकातर्फ उनको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाएको वित्तीय विवरणमा अन्य आयस्रोत नभएका भट्टराईले वैध सम्पत्तिको प्रयोग गरेको देखिँदैन भने अर्कोतर्फ विद्यमान ‘लिगल कम्प्लाइन्स’ पनि पूरा गरेका छैनन् । साथै अहिलेको उनको यस्तो भड्किलो प्रचारको वित्तीय स्रोत के हो ?
तेस्रो, भट्टराईले आठ महिनादेखि ‘नयाँ शक्ति’ अभियान गर्दैछन् । देशमा दलसम्बन्धी स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ । त्यतिमात्र होइन, नेपालमा एक एनजिओसमेत दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न पाइँदैन भने आठ महिनासम्म बिनादर्ता गैरकानुनी पार्टी गतिविधि गर्ने गरेका छन् । यही हो सदाचार÷सुशासन ?
चौथो, यिनी प्रधान मन्त्री भएको समयमा यिनले सरिता गिरीलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर मन्त्रीबाट हटाए । गिरीले बचाउमा आफूलाई विधिअनुसारको प्रक्रियाद्वारा छानविन गराउन सार्वजनिकरूपमै चुनौती दिइन् । तर उनले त्यसो गरेनन् । यदि गिरीले भ्रष्टाचार गरेको भए अख्तियारलाई छानविन गर्न लेखेर पठाउनुपथ्र्याे । देशमा कसैलाई भ्रष्टाचारी हो÷होइन भन्ने निर्धारण गर्ने विधि र प्रक्रिया छ । अदालतले मात्र कसैले भ्रष्टाचार गरेको हो÷होइन भन्ने न्यायिक निरुपण गर्छ । बहालवाला प्रधान मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारी भनेर आरोप लगाएर बर्खास्त गरेरमात्र हुँदैन । यसबाट गिरीको राजनीतिक साखमात्र गिराउन र उनको सामाजिक प्रतिष्ठा र चरित्र हत्या गर्नमात्र सो कार्य गरेको प्रतीत हुन्छ । साथै उनले गिरीलाई एक महिला त्यो पनि मधेसी महिला हो भनेर हेपेको पनि हुन सक्छ । यसो हो भने लैङ्गिक असंवेदनशीलता पनि प्रष्ट हुन्छ ।
पाँचौँ, प्रधान मन्त्री भएका बेला संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको आर्थिक कार्यविधिलाई बेवास्ता गर्दै नेताको स्वास्थ्य उपचारमा करोडौँ लुटाउने र आर्थिक सहायता चन्दा पुरस्कार बाँड्नेमा पनि भट्टराई अरुभन्दा पछाडि छैनन् । यी पाँचै तथ्यले बाबुराम विधिको शासन मान्दैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । र, विगतमा विधि लत्याउने भोलि विधिको शासन मान्छ भनेर विश्वास गर्ने तार्किक आधार छैन ।
आर्थिक समृद्धिको गलत दाबी
एक, भट्टराईले ‘नयाँ शक्ति’ ले आर्थिक समृद्धि ल्याउने दाबी गरेका छन् । तर, आर्थिक सर्वेक्षण हेर्ने हो भने उनी प्रधान मन्त्री भएको वर्ष पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछिको सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि ३.४२ प्रतिशतमात्र भएको छ, चालु आर्थिक वर्षबाहेक । उनीसँग जादुको छडी छैन छुमन्तर भनेर समृद्धि ल्याउने । तथ्य र तर्कले प्रमाणित दाबीमात्र विश्वसनीय हुन्छ । र, विधिको शासन र भ्रष्टाचारमुक्त जवाफदेही शासन आर्थिक विकासका लागि आवश्यक लगानीको वातावरण निर्माणको सर्त हो । उनी यसप्रति प्रतिबद्ध छैनन् भन्ने विगतको अनुभवले देखाउँछ । अनि कहाँबाट हुन्छ समृद्धि ?
दुई, भट्टराईको सामाजिक समावेशीकरणको वकालत पनि सतही हो । उनले गरेको राम्रो काम काठमाडौँको २० किलोमिटर सडक विस्तार हो । सामाजिक समावेशीकरणको त्यत्रो पुनर्जागरणका बेला निर्माण गरेको सडक न नेत्रहीनमैत्री छ, न त ह्विलचेयरमैत्री नै । कुशल राजनीतिज्ञ र इन्जिनियरको सबैभन्दा उत्कृष्ट विकासमा एक फिट अग्ला तगारा छन्, जेब्राक्रसिङमा । साथै, काठमाडौंको सडक विस्तारमा विभागीय मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको उनीभन्दा कम योगदान छैन । मधेसी भनेर होला उनले चर्चा पाएनन् ।
तीन, उनी प्रधान मन्त्री भएका बेला विकास बजेट आफ्नो क्षेत्र र जिल्लामा मात्र केन्द्रित गरेको तथ्य त्यसबेलाका पत्रपत्रिकामा आएको थियो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला केन्द्रित भट्टराईले देशमा समृद्धि बाँड्छन् भन्ने मान्नु तर्कसंगत हुँदैन ।
चार, माघको जाडोमा एकाबिहानै भएका हाँडाभाडा, खाद्यान्न र लत्ताकपडासमेत निकाल्न नदिइ वाग्मती किनारका सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउन लगाउने उनै प्रधान मन्त्री हुन् । यही हो उनको समावेशी विकासको नमुना ?
एक, माओवादी परित्यागपछि जस्तो राजनीतिक दल निर्माण गर्दैछन्, पहिला विगतको गल्तीका लागि क्षमायाचना गर्नपर्छ उनले । यदि उनलाई यस्तै राजनीति गर्नु थियो भने किन देशलाई १० वर्ष गृह युद्धमा धेकेले ? माओवादी विद्रोहमा मारिएका पन्ध्र हजार व्यक्ति उनी प्रधान मन्त्री बन्ने भ¥याङ्गमात्र भएनन र ? माओवादी विद्रोहमाथि गर्व र ‘नयाँ शक्ति’ को दार्शनिक र राजनीतिक आधार संँगसंँगै जाने विषय होइनन् । माओवादी विद्रोहले भएको जनधनको क्षतिका लागि देश र जनताका नाममा क्षमायाचना नगर्दासम्म उनमा ‘पलिटिकल इन्टिग्रिटी’ भएको मानिँदैन ।
दोस्रो, आफै संवैधानिक समितिको संयोजक भएर संविधान निर्माण गर्ने तर त्यसको घोषणापछि संविधान सभाबाट राजीनामा दिएर त्यही संविधानको तराईमा गएर निन्दा गर्ने र अहिले यसै संविधानअनुसार राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल भएर पार्टी खोल्ने भट्टराईमा ‘पोलिटिकल इन्टिग्रिटी’ र ‘इन्टेलेक्च्युल इन्टिग्रिटी’ छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यस्तै उनले संवैधानिक समितिको संयोजक भएर देशको सम्प्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई चुनौती दिँदै स्वतन्त्र राज्यको माग गर्ने व्यक्तिलाई राज्यकोषमा आयोजित कार्यक्रममा निम्त्याए । यो कार्य ‘पलिटिकल इन्टिग्रिटी’ नभएको मात्र होइन, देशद्रोह हो । अनि उनीबाट स्वाधीनता÷सार्वभौमिकताको रक्षा होला र ?
तेस्रो, उनले सूर्यबहादुर थापाको मृत्युलाई ‘एक राजनीतिक अभिभावक गुमाएको’ भनेका थिए । १९ माओवादी लडाकुलाई पछाडि हात बाँधेर दोरम्बामा अमानवीय तरिकाले हत्या हुँदा थापा देशका प्रधान मन्त्री थिए, भट्टराई प्रमुख शान्ति वार्ताकार थिए । जसरी माओवादी विद्रोह प्रधान मन्त्री बन्ने भ¥याङ बनाए, उनको ‘नयाँ शक्ति’ पनि त्यस्तै होइन भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।
अन्त्यमा, भट्टराईमा ‘स्टेटमन्ट अफ इन्टिग्रिटी’ को पनि अभाव छ । ४० बुँदे माग आफँै शासनमा रहँदा किन सम्बोधन नगरेको भनेर सोध्दा उनले त्यो अब पुरानो कुरो भइसक्यो भने । यसबाट उनमा ‘स्टेटमन्ट अफ इन्टिग्रिटी’ को अभाव प्रष्ट हुन्छ । ‘नयाँ शक्ति’ भोलि कथंकदाचित सत्तामा आयो र सुशासन÷सदाचार र समृद्धि खोइ भनेर सोधे भट्टराईले यो कुरा पुरानो भयो भन्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी ‘नयाँ शक्ति’ का एक लाख संस्थापकले गर्न सक्दैनन् ।
संक्षेपमा, नेपालीको स्मरण छोटो छ । ‘रिजनिङ’ पनि समालोचनात्मक बन्न सकेको छैन् । त्यसैले नै बीस किलोमिटर सडक विस्तार देशकै समृद्धिको पर्यायवाचीका रूपमा भट्टराई उभ्याउँदै छन् । तर निकट अतीततर्फ हेर्दा भट्टराई अहिलेसम्म जीवितमध्येका सबैभन्दा खराब रेकर्ड र कमसल कार्यसम्पादन क्षमता भएका प्रधान मन्त्री हुन् । ‘आइकन’ भट्टराईकै विगतले भविष्यमा ‘नयाँ शक्ति’ को देशमा यसले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्छ भनेर विश्वास गर्नु कुनै तर्कसंगत र युक्तिसंगत हुँदैन । नागारिक दैनिकवाट